Nhau - Iyo Belated Yekugadzirisa Order yeOinoshanda Chiedza
Kana vatengi vekunze vachiti ini handina kumbobvira ndatenga rako rekushandisa mwenje, hunhu hwayo hwakavimbika here? Kana kuti uri kure neni. Chii chandinofanira kuita kana paine dambudziko remhando?
Zvese zvekutengesa, panguva ino, zvinokuudza kuti zvigadzirwa zvedu ndizvo zvakanakisa. Asi unovadavira zvechokwadi here?
Seunyanzvi hwekugadzira mwenje unoshanda wakanyatso kubatikana muindasitiri yezvokurapa kwemakore makumi maviri, tinogona kukuudza neyakakura mushandisi rumbidzo data kumba nekune dzimwe nyika, ndapota tivimbe.
Mwedzi mishoma yapfuura, takagamuchira email kubva kumutengi. Mutengi akatenga mwenje yedu yekushandisa ye LED muna2013. Kubvira ipapo, pakange pasina chikumbiro chekugadzirisa.
Nekudaro, nekuti hupenyu hwebasa rebato rePCB iri rave kusvika muganho, vanofunga kutinyorera zvinhu zvitsva zvekugadzirisa.
Kubva 2013 kusvika 2020, tanga takamirira iyi yekugadzirisa odha kwemakore manomwe.
Isu tinofara zvikuru kugamuchira iyi email. Munguva yakapfuura, isu tagara takanamatira kune yemhando mutsetse uye takaedza kugadzira zvemhando yepamusoro zvigadzirwa. Isu tinogara tichigadzirisa chimiro chechigadzirwa uye dhizaini tisingaite muhondo dzemitengo. Mazuva ano, zvigadzirwa zvedu zvave zvichishandiswa nevatengi kwemakore mazhinji. Iye zvino vatengi vachiri kutenga zvishongedzo uye ramba uchizvishandisa. Izvo zvakakwana kuti tione kuti kutsungirira kwedu kune zvakunoreva.
MuChina, isu tine vatengi vazhinji vanovimba mhando yedu zvakanyanya. Mushure mekushandisa kwedu mwenje kukwegura, kana uchitenga nyowani yekushandisa mwenje, ivo vachiri kukoshesa chiratidzo chedu. Kana, kana chipatara chekare chichienda kune imwe saiti nyowani, ivo vachiri kutikumbira kuti tivabatsire kubvisa mwenje wekushandisa wekare nekuimisazve muchipatara chitsva.
Isu tinotenda nerutsigiro rwakasimba rweava vashandisi, uye isu zvirokwazvo tichasimudzira mweya wekuzvininipisa, teerera nokungwarira kune zvinodiwa nevatengi, ramba uchivandudza zvigadzirwa, uye fambirana nenguva.